Elo Masoandro, Elo Elo, Elo Mamoritra - DongFangZhanXin
Serivisy momba ny fividianana eran-tany
Elo mahitsy 23in
Elo mahitsy 25in
Elo golf lehibe fanampiny
Elo ho an'ny ankizy
Jinjiang Zhanxin Umbrella Co., Ltd niorina tamin'ny 1998.
Maherin'ny 50acres misy 1st tranobe mamokatra fiberglass, 2nd tranobe atrikasa fivoriambe, 3rd tranobe birao, 4faha dorm ny mpiasa, 5faha trano famokarana elo.Misy mpiasa mahay 400 manana traikefa mamokatra elo maherin'ny 15taona, mifantoka amin'ny famokarana elo sy famokarana elo izahay. Ny vokatra lehibe anananay dia ao anatin'izany ny elo mivalona, ​​elo an'ny ankizy, elo mahitsy, elo golf, elo ivelany ary elo fanao amam-bika an'ny mpamorona. Zhanxin Umbrella dia nahazo fanamarinana ISO9001, BSIC, Sedex, Avon, Disney. Ny kalitaon'ny elo dia nandalo ny fenitra REACH, EN71, ROSH, PAH, Azo-Free.
ASD MARKET WEEK dia iray amin'ny fampirantiana lehibe indrindra any Etazonia hatramin'ny 1961 miaraka amin'ireo mpanentana 2700 & mpivarotra 45000 avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao manatrika ny hetsika indroa taom-pankalazana, natao tamin'ny volana martsa sy aogositra. ASD dia tsena matanjaka sy mitombo izay mampivondrona ireo entana marobe indrindra eran'izao tontolo izao avy amin'ny mpivarotra mihoatra ny 2700 amin'ny fampisehoana varotra vokatra mihinana. ASD seho dia ahitana: Fanomezana & Fandraisana; Fitaovana lamaody; Firavaka Cash & Carry; Fahasalamana sy hatsarana sns….
Ny foiben-toeranay any Xiamen City, ny marika dia OVIDA izay mikendry ny hiray hina sy hikely aina ho an'ny fanavaozana, amin'ny fampiasana ny traikefa sy ny serivisinay ho an'ny matihanina hanampiana ny tetikasanao rehetra hitranga. Ny fanomezana ny vidiny sy serivisy tsara indrindra amin'ny tetikasa elo no zava-dehibe indrindra amin'ny asan'ny Ovida isan'andro. Ny famoronana elo namboarina no asa lehibe indrindra isan'andro. Vokatr'izany dia mirona izahay hahita ny elo tonga lafatra ho an'ny olona rehetra miatrika ny zavatra fampiroboroboana. Noho izany ireo mpamolavola, teknisiana ary mpivarotra ao aminay dia hanolotra fanesoana maimaimpoana ho an'ny mpanjifa indray mandeha hanampiana ny tetikasa hitrangan'izany. Ny ekipanay QC dia hanaraka ny dingana tsirairay amin'ny famokarana elo, mandefa stardard AQL 2.4 any amin'ny Departemantan'ny varotra, ity fandrosoana ity izay manome antoka fa ny mpanjifa tsirairay dia manana fari-pahaizana tsara kalitao rehefa mahazo.
Color Fiberglass Windproof mandeha ho azy Elo W ...
21 inch 8 taolan-tehezana manokatra famolavolana fikirakirana tokana ...
Elo feno avo 3 heny misokatra feno mandeha ho azy feno
Elo am-paosin'ny mini endrika elo 5 aforitra
Fahavaratra ivelan'ny trano mafana vaovao mpanafana mangatsiaka elektrika Umb ...
Elo marindrano miolakolaka miaraka amin'ny C-Shaped Ha ...
Automatic Multi color Storm proof 360 Stretch S ...
Ao amin'ny firenentsika, ny fahatakarana ny elo dia mampatsiahy kokoa ireo seho mahafinaritra an'ny orana sy zavona Jiangnan mankany ...
Any Japon, ny loko kolontsain'ireo elo dia miavaka tokoa
Ny elo dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fiainantsika. Tsy azo sarahina amin'ny elo izy io amin'ny andro orana. Rehefa dinihina tokoa, tsy misy zavatra tsara kokoa ho ...
Ny ampahany lehibe amin'ny elo dia ny elo sy lamba elo
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fotoana maharitra, ny elo dia nanjary filana tsikelikely amin'ny fiainantsika. Rehefa dinihina tokoa, misy ny toe-javatra tsy ampoizina ...
Popularization ny elo marika, miditra amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona
Androany isika dia manana karazana fanontana maro amin'ny elo. Toy ny fanaovana pirinty amin'ny lamba landy, fanontana hafanana. Ity ambany ity ny sary fanontana lamba vita amin'ny landy ...
Fanontana amin'ny lamba landy
Hainao ve ny manapaka lamba elo ho takelaka? Araho ny ozida elo orinasa, ho fantatrao bebe kokoa ny fandrosoana elo. Voalohany dia mila manapaka ...
Fifandraisana ： Ms Aven